ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သရဲးပူးခံရတဲ့ကိုရင်နှင့် အတိတ်ဘဝမှ မယ်တော်ဘီလူးမ၏ မိခင်မေတ္တာ - Barnyar Barnyar
May 1, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လက်ထက်တော် အခါက သာဝတ္တိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်စတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးတွေ အသီးသီးမှာ ညနေချမ်းတရားသဘင်တွေ ကျင်းပလေ့ ရှိကြပါသည်။
တရားသဘင်ဆိုပေမယ့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုတွေ ရှင်းလင်းဖြေကြားမှုတွေ ပြုကြတာလည်း ရှိသည်။ ဆွမ်းစားပြီးချိန်နှင့် ညနေစောင်းတွေမှာ အများဆုံး ပြုကြပါသည်။
ဉာဏ်အလင်းရပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားသူ အရိယာသံဃာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကို တန်ခိုးတော်ဖြင့် ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး သီတင်းသုံးဖော် ရဟန်းများအား ဖိတ်ကြားကာ မိမိတို့ရဲ့နောက်ကြောင်းပြန်တရားများကို တရားဟောဓမ္မာရုံများ ဆွမ်းစားဇရပ်များ၌ ပြန်လည်ဟောကြားလေ့ ရှိပါသည်။
တရားပွဲးများသည် အလွန်အသက်ဝင်လှပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအတိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ကျောင်းကိုအမွှေးနံ့သာတွေ ပန်းမာလာတွေ . .ဆီမီးခွက်တွေ ယူဆောင်လာပြီး ပူဇာမှုများပြုကာ ရဟန်းတော်တွေကို ဝန်းရံပြီး ညနေချမ်းဓမ္မသဘင်မှာ တရားလာနာကြပါတယ်။
တကယ့်လက်တွေ့တရားတွေ ဈာန်တရားတွေဆိုတော့ တရားပွဲးကြီးတွေတစ်ခု ပြီးသွားတိုင်း ပြီးသွားတိုင်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာ ပိုမိုထွန်းလင်း ပြန့်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ သီတင်းစကားတွေဟာ အခြားတိုင်းပြည် မြို့ပြနိုင်ငံတွေအထိ ပျံ့နှံ့သွားကြပါသည်။
သာဝတ္တိမြို့သူဥပါသိကာမတစ်ဦး၏ တစ်ဦးတည်းသောသား သာနုသာမဏေသည် ငယ်စဉ်ကပင် ရှင်ပြုခဲ့ပြီး ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း ညနေခင်းတရားသဘင်တွေ ကျင်းပတိုင်း အလှူရှင်တို့ရဲ့ ဆီမီးတွေကို ထွန်းညှိပေးလေသည်။ ကျောင်းဝေယျာဝစ္စများ ပြုလုပ်ပေးပြီး သောက်ရေ နေ့စဉ်ခပ်ပေးသည်။
တံမြက်လှည်းခြင်းဝတ်ကို မပြတ်စေပဲ စောင့်ထိန်းလေသည်။ အမျိုးကောင်းသား ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အကျင့်သီလနှင့် ပြည့်စုံသော ကိုရင်သာနုသည် သာဝတ္တိမြို့သူမြို့သားများကို ညနေခင်းတရားသဘင်ပွဲသို့ ကြွရောက်တရားနာယူကြပါရန် လိုက်ပြီးနိုးဆော်ပေးရသည့် ဝတ္တရားကိုလည်း တာဝန်ယူထားသည့် အာဃကိုရင်လေး ဖြစ်လေသည်။
အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံ၍ ချစ်စဖွယ်ဖြစ်သည့် ကိုရင်သာနုကို တစ်နေ့၌ ရဟန်းတော်များက ကိုယ်တိုင်တရားဟောကြည့်ဘို့ ဝိုင်းဝန်း တိုက်တွန်းကြလေသည်။ ပါရမီထူးသည့်သာနုလည်း တရားပလ္လင်ပေါ်တက်ကာ သာယာသောအသံဖြင့် တရားဟောလေတော့၏။
သာနု၏သာယာသော တရားသံကို ဒေဝလောကမှ နတ်တွေကြားကုန်ကြပြီး စုရုံးကာ လာရောက်နာကြားကြလေသည်။ တရားပွဲးဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ဒကာဒကာမတွေလည်း အံ့သြဝမ်းသာနေကြသည်။ သာနုလည်း ‘ငါ၏ ဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့ကို ငါ၏မိခင်ဖခင်တို့အား အမျှပေးဝေပါ၏’ဟု ဆို၍ အမျှပေးလိုက်ပါသည်။
လူတို့ရဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတွေဟာ ဘယ်သောအခါမျှ အဟောသိကံ မဖြစ်ချေ။ သာနု၏ အမျှဝေသံဟာ ပရလောကထဲအထိ ရိုက်ခတ်သွားပါတော့တယ်။ သာနု၏ အမျှဝေသံကို လူသားမိခင်ကမကြားရပေမယ့်. .
နတ်များနှင့်အတူ တရားလာနာနေတဲ့ အတိတ်ဘဝက မယ်တော်ဘီလူးမက ကြားသွားပြီး သားဖြစ်သူ၏ ဓမ္မဒါနကို ဝမ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်လိုက်ရာ ချက်ချင်းပဲ ဘုန်းတန်ခိုးတွေ တိုးတက်သွားပါတော့သည်။
(ဤနေရာ၌ အာမိသအလှူထက် ဓမ္မအလှူက ပိုမြတ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုကြပါ။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်၌ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်း၍ ဖြစ်ပါသည်။)
တရားနာလာသော နတ်များဘီလူးများသည် သာနုသာမဏေကို ရိုသေလေးစားကြသူများဖြစ်၍ သားကိုလေးစားသည့်အလျောက် မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဘီလူးမကိုလည်း ‘သာနု၏မိခင်’ဟူ၍ ရိုသေလေးစားကြလေတော့၏။
မိခင်ဟောင်းဘီလူးမကို မြင်သည်နှင့် တန်ခိုးကြီးသောနတ်များကပင် လမ်းဖယ်ပေးခြင်း နေရာပေး၍ တလေးတစားပြုခြင်းများ ပြုကြပါတော့သည်။ ဘီလူးမယ်တော်ဟာသားကိုရင်ကိုအမှီပြုပြီး ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအဖြစ်ကို ရောက်နေပါတော့သည်။
ကိုရင်သာနုကတော့ ဒါတွေကို တကယ်မသိရှာချေ။ နတ်လောက၌ သူ၏ဂုဏ်သီတင်း ဟိုးဟိုးကျော်ပြီးနေတာကို မသိရှာပဲ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရာက်လာခဲ့ပါပြီ။ လူ့သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်တွင်းဓာတုဖြစ်စဉ်တွေ ပြောင်းလည်းလာကာ ဆန့်ကျင်ဘက်အာရုံကို စိတ်ဝင်စားလာမိပါသည်။
သာသနာ့ဘောင်မှာ မပျော်မွေ့နိုင်ရှာတော့ပဲ လူထွက်ချင်လာပါတော့သည်။ ဒါဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး သဘာဝတရားပါပဲ။ ကိုရင်သာနုဟာ အကျင့်သိက္ခာကို အလေးထားသူ သာမဏေကောင်းပီပီ မြတ်သောသင်္ကန်းကို အစွန်းအထင်းမဖြစ်စေလိုပဲ ရိုးသားစွာလူထွက်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုချင်ရှာတာပါ။
ကိုရင့်ဘက်ကကြည့်ရင် မှန်ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူကတော့ လူ့ဘောင်၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ပြောပြပြီး လူမထွက်ရန် အမျိုးမျိုးချော့မော့ ပြောရှာပါသည်။ ကိုရင်သာနုကတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးလေပြီ ပြောမရသည့်အဆုံး ‘နောက်ဆုံးတစ်နပ်တော့ မေမေဆွမ်းကပ်ပါရစေဦး’ဟု တောင်းပန်ကာ ဆွမ်းချက်ရှာလေသည်။
ထိုအဖြစ်ကို ဘဝဟောင်းမှမိခင်ဘီလူးမ သိရှိသွားကာ အကြီးအကျယ်သောက ရောက်လေတော့သည်။ ကြံရာမရသည့်အဆုံး သူမ၏သုခုမရုပ်နုခန္တာကိုယ်အား သားကိုရင်သာနု၏ သြဠာရိကရုပ်ကြမ်းခန္တာထဲသို့ ဝင်ရောက် ပူးကပ်လိုက်လေတော့သည်။
သာနုသာမဏေ၏ ဦးခေါင်းနှင့်ဇတ်သည် ကျောဘက်သို့ လည်ထွက်သွားပြီး ရုတ်တရက် လဲကျသွားလေတော့သည်။ မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်လာပြီး ပါးစပ်မှ တံတွေးများ အဆက်မပြတ် ယိုစီးကျလာလေတော့သည်။
မိခင်ဖြစ်သူလည်း ချက်ပြုတ်နေရာမှ ချက်ချင်းပြေးလာပြီး သားကိုပိုက်လျက် ငိုကြွေးနေလေတော့သည်။ ရဟန်းသံဃာများ ဥပသကာ ဥပါသိကာများလည်း စုရုံးလာကြသည်။
ကိုရင့်ကို စီးထားသောဘီလူးမသည် နက်သောအသံကြီးဖြင့် “ရှစ်ပါးသီလကို ဆောက်တည်သူတို့အား ဘီလူးများဝင်ရောက် မပူးကပ်နိုင်သော်လည်း ယခုသာနုသာမဏေသည် လူထွက်ရန်ဟူသည့် မကောင်းသော အကြံအစည်ရှိ၍ နှောင့်ယှက်ရသည်။
နောင်အခါ လူထွက်မယ်ကြံတိုင်း ယခုကဲ့သို့ပင် ပူးကပ်နေမှာပဲ”ဟု ကြုံးဝါးသတိပေးပြီး သာနု၏ကိုယ်ထးမှ ထွက်လေသည်။
သာနုလည်းပြန်လည်သတိရလာပြီးမှ ဖြစ်ပုံကိုသိသွားရာ ‘သြ. .ငါ၏အဖြစ်ကို နတ်တွေကတောင် သိနေပါပေါ့လား’ဟု ရှက်ရွံ့ခြင်းအထူးဖြစ်မိကာ လူထွက်ရန်အကြံကို စွန့်၍ ထိုနေ့တွင်ပင် ရဟန်းဘောင်သို့ တက်လေတော့သည်။
လောကသုံးပါး၏ တုနှိုင်းမဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ထံတော်ပါးသို့ သာနုမထေရ်ချဉ်းကပ်လာလျှင် “ချစ်သား. .ဤစိတ်သည် ဟိုးရှေးအခါကပင် အာရုံကို အလိုရှိတိုင်း လှည့်လည်ကျက်စားခဲ့ပြီးပြီလေ. .
ချွန်းကိုင်ထားတဲ့ ဆင်ထိန်းဟာ မုန်ယစ်နေသောဆင်ကို နှိပ်ကွက်ဘိသကဲ့သို့ အေးချမ်းအောင် သင့်တင့်မျှတအောင် နှလုံးသွင်းပြီး စိတ်ကို ကောင်းစွာနှိပ်ကွပ်ပြီး မြတ်သောတရားကိုသာ အားထုတ်လေလော့! ဟူ၍ သြဝါဒပေးတော်မူပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် အရှင်သာနုသည် ဘဝဟောင်းမှ မယ်တော်နတ်ဘီလူးမ၏ မိခင်မေတ္တာကြောင့် နောင်အခါတွင် ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်နိုင်သည့် ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သက်တော် (၁၂၀)မှာနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုကာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့ပါသတည်း။
တကယ်တော့ အနမတဂ္ဂရှည်လျားလှတဲ့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲးအတွင်းမှာ သတ္တဝါတွေဟာ ယူခဲ့ရတဲ့မိန်းမတွေ ယူခဲ့ရတဲ့လင်သားတွေဟာ မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းထဲကသဲလုံးများ မကအောင်ပင် ရှိခဲ့လေပြီတကား။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့် ကြုံတုံးကြုံခိုက်မှသာ ရနိုင်တဲ့ ဈာန်တရား မဂ်တရားတွေကသာ ရှားပါးအဖိုးတန်ပြီး ရခဲလှ၍ အရယူသင့်ပေသည်။
ယုတ်စွအဆုံးလူသားမပြောနှင့် တိရိစ္ဆာန်ဘုံ၌ အသိဉာဏ်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အင်းစက်ပိုးမွှားတွေ ခြင်တွေတောင် မေထုံသံဝါသပြုကြလေသည်ပဲ။ အိမ်ထောင်ပြုကြလေသည်ပဲ။
ဒီကာမတဏှာတွေဟာ အပြင်ပန်းကကြည့်လျှင် မက်လောက်စရာ တစ်ခုခုရှိသကဲ့သို့ အသွင်ဆောင်သော်လည်း အမှန်တကယ် ခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လျှင် ဘာအနှစ်သာရမှ မရှိလေပြီတကား။
မျက်မှောက်ခေတ်၂၁ရာစုကဲ့သို့ လောက၏ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ပျက်ယွင်းလာသည့်အချိန်၌ ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ ဝမ်းမြောက်စရာတွေရှားပါးလာသည့် အခါ၌ ပိုလို့ပင် သံဝေဂရသင့် တရားကို အားထုတ်သင့်လေပြီ။
အသက်ရှင်သန်နေရခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအခွှင့်အရေးသည်ကား ဗြဟ္မဝိဟာရတရားကို ပွားများကြဘို့ပင်တည်း. . .။ ကျမ်းကိုး ; : ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝဂ်
ဗုဒ္ဓသာသနာပြု ဆရာကောင်းထွဋ်ခေါင် (ဝမ်းတွင်းမှော်စက်ရှင်)
ဝိဇ္ဇာဓရဂမ္ဘီရအစီအရင်နှင့်ဗေဒင်ယတြာ၊ မင်္ဂလာအကြံပြုဟောခန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉၄၂၈၁၁၅၂၃၅
ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ သရဲးပူးခံရတဲ့ကိုရငျနှငျ့ အတိတျဘဝမှ မယျတျောဘီလူးမ၏ မိခငျမတ်ေတာ
ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ လကျထကျတျော အခါက သာဝတ်တိပွညျ ဇတေဝနျကြောငျးတျော ရာဇဂွိုဟျပွညျ ဝဠေုဝနျကြောငျးတျောစတဲ့ ကြောငျးတျောကွီးတှေ အသီးသီးမှာ ညနခေမျြးတရားသဘငျတှေ ကငျြးပလေ့ ရှိကွပါသညျ။
တရားသဘငျဆိုပမေယျ့ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးမေးမွနျးမှုတှေ ရှငျးလငျးဖွကွေားမှုတှေ ပွုကွတာလညျး ရှိသညျ။ ဆှမျးစားပွီးခြိနျနှငျ့ ညနစေောငျးတှမှော အမြားဆုံး ပွုကွပါသညျ။
ဉာဏျအလငျးရပွီးရဟန်တာဖွဈသှားသူ အရိယာသံဃာတှဟော မိမိတို့ရဲ့အတိတျဘဝဖွဈစဉျတှကေို တနျခိုးတျောဖွငျ့ ပွနျလညျဆငျခွငျပွီး သီတငျးသုံးဖျော ရဟနျးမြားအား ဖိတျကွားကာ မိမိတို့ရဲ့နောကျကွောငျးပွနျတရားမြားကို တရားဟောဓမ်မာရုံမြား ဆှမျးစားဇရပျမြား၌ ပွနျလညျဟောကွားလေ့ ရှိပါသညျ။
တရားပှဲးမြားသညျ အလှနျအသကျဝငျလှပွီး စိတျဝငျစားဖှယျရာအတိ ဖွဈခဲ့တယျ။ မွို့သူမွို့သားတှဟော ကြောငျးကိုအမှေးနံ့သာတှေ ပနျးမာလာတှေ . .ဆီမီးခှကျတှေ ယူဆောငျလာပွီး ပူဇာမှုမြားပွုကာ ရဟနျးတျောတှကေို ဝနျးရံပွီး ညနခေမျြးဓမ်မသဘငျမှာ တရားလာနာကွပါတယျ။
တကယျ့လကျတှတေ့ရားတှေ ဈာနျတရားတှဆေိုတော့ တရားပှဲးကွီးတှတေဈခု ပွီးသှားတိုငျး ပွီးသှားတိုငျး ဗုဒ်ဓသာသနာတျောဟာ ပိုမိုထှနျးလငျး ပွနျ့ပှားလာခဲ့ပါတယျ။ မွငျ့မွတျတဲ့ သီတငျးစကားတှဟော အခွားတိုငျးပွညျ မွို့ပွနိုငျငံတှအေထိ ပြံ့နှံ့သှားကွပါသညျ။
သာဝတ်တိမွို့သူဥပါသိကာမတဈဦး၏ တဈဦးတညျးသောသား သာနုသာမဏသေညျ ငယျစဉျကပငျ ရှငျပွုခဲ့ပွီး ဇတေဝနျကြောငျးတိုကျကွီးအတှငျး ညနခေငျးတရားသဘငျတှေ ကငျြးပတိုငျး အလှူရှငျတို့ရဲ့ ဆီမီးတှကေို ထှနျးညှိပေးလသေညျ။ ကြောငျးဝယြောဝစ်စမြား ပွုလုပျပေးပွီး သောကျရေ နစေ့ဉျခပျပေးသညျ။
တံမွကျလှညျးခွငျးဝတျကို မပွတျစပေဲ စောငျ့ထိနျးလသေညျ။ အမြိုးကောငျးသား ဖွဈသညျနှငျ့အညီ အကငျြ့သီလနှငျ့ ပွညျ့စုံသော ကိုရငျသာနုသညျ သာဝတ်တိမွို့သူမွို့သားမြားကို ညနခေငျးတရားသဘငျပှဲသို့ ကွှရောကျတရားနာယူကွပါရနျ လိုကျပွီးနိုးဆျောပေးရသညျ့ ဝတ်တရားကိုလညျး တာဝနျယူထားသညျ့ အာဃကိုရငျလေး ဖွဈလသေညျ။
အကငျြ့သီလနှငျ့ပွညျ့စုံ၍ ခဈြစဖှယျဖွဈသညျ့ ကိုရငျသာနုကို တဈနေ့၌ ရဟနျးတျောမြားက ကိုယျတိုငျတရားဟောကွညျ့ဘို့ ဝိုငျးဝနျး တိုကျတှနျးကွလသေညျ။ ပါရမီထူးသညျ့သာနုလညျး တရားပလ်လငျပျေါတကျကာ သာယာသောအသံဖွငျ့ တရားဟောလတေော့၏။
သာနု၏သာယာသော တရားသံကို ဒဝေလောကမှ နတျတှကွေားကုနျကွပွီး စုရုံးကာ လာရောကျနာကွားကွလသေညျ။ တရားပှဲးဟာ အောငျမွငျခဲ့ပါသညျ။ ဒကာဒကာမတှလေညျး အံ့သွဝမျးသာနကွေသညျ။ သာနုလညျး ‘ငါ၏ ဤဓမ်မဒါနကုသိုလျအဖို့ကို ငါ၏မိခငျဖခငျတို့အား အမြှပေးဝပေါ၏’ဟု ဆို၍ အမြှပေးလိုကျပါသညျ။
လူတို့ရဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတှဟော ဘယျသောအခါမြှ အဟောသိကံ မဖွဈခြေ။ သာနု၏ အမြှဝသေံဟာ ပရလောကထဲအထိ ရိုကျခတျသှားပါတော့တယျ။ သာနု၏ အမြှဝသေံကို လူသားမိခငျကမကွားရပမေယျ့. .
နတျမြားနှငျ့အတူ တရားလာနာနတေဲ့ အတိတျဘဝက မယျတျောဘီလူးမက ကွားသှားပွီး သားဖွဈသူ၏ ဓမ်မဒါနကို ဝမျးမွောကျစှာ သာဓုချေါလိုကျရာ ခကျြခငျြးပဲ ဘုနျးတနျခိုးတှေ တိုးတကျသှားပါတော့သညျ။
(ဤနရော၌ အာမိသအလှူထကျ ဓမ်မအလှူက ပိုမွတျတယျဆိုတာ သတိပွုကွပါ။ အလှူခံပုဂ်ဂိုလျ၌ ပိုမိုအကြိုးဖွဈထှနျး၍ ဖွဈပါသညျ။)
တရားနာလာသော နတျမြားဘီလူးမြားသညျ သာနုသာမဏကေို ရိုသလေေးစားကွသူမြားဖွဈ၍ သားကိုလေးစားသညျ့အလြောကျ မိခငျဖွဈခဲ့ဖူးသော ဘီလူးမကိုလညျး ‘သာနု၏မိခငျ’ဟူ၍ ရိုသလေေးစားကွလတေော့၏။
မိခငျဟောငျးဘီလူးမကို မွငျသညျနှငျ့ တနျခိုးကွီးသောနတျမြားကပငျ လမျးဖယျပေးခွငျး နရောပေး၍ တလေးတစားပွုခွငျးမြား ပွုကွပါတော့သညျ။ ဘီလူးမယျတျောဟာသားကိုရငျကိုအမှီပွုပွီး ကွီးပှားခမျြးသာခွငျးအဖွဈကို ရောကျနပေါတော့သညျ။
ကိုရငျသာနုကတော့ ဒါတှကေို တကယျမသိရှာခြေ။ နတျလောက၌ သူ၏ဂုဏျသီတငျး ဟိုးဟိုးကြျောပွီးနတောကို မသိရှာပဲ တဖွညျးဖွညျးအရှယျရာကျလာခဲ့ပါပွီ။ လူ့သဘာဝအတိုငျး ကိုယျတှငျးဓာတုဖွဈစဉျတှေ ပွောငျးလညျးလာကာ ဆနျ့ကငျြဘကျအာရုံကို စိတျဝငျစားလာမိပါသညျ။
သာသနာ့ဘောငျမှာ မပြျောမှနေို့ငျရှာတော့ပဲ လူထှကျခငျြလာပါတော့သညျ။ ဒါဟာအပွဈမဟုတျပါဘူး သဘာဝတရားပါပဲ။ ကိုရငျသာနုဟာ အကငျြ့သိက်ခာကို အလေးထားသူ သာမဏကေောငျးပီပီ မွတျသောသင်ျကနျးကို အစှနျးအထငျးမဖွဈစလေိုပဲ ရိုးသားစှာလူထှကျပွီး အိမျထောငျပွုခငျြရှာတာပါ။
ကိုရငျ့ဘကျကကွညျ့ရငျ မှနျပမေယျ့ မိခငျဖွဈသူကတော့ လူ့ဘောငျ၏ဆငျးရဲဒုက်ခမြားကို ပွောပွပွီး လူမထှကျရနျ အမြိုးမြိုးခြော့မော့ ပွောရှာပါသညျ။ ကိုရငျသာနုကတော့ ဆုံးဖွတျပွီးလပွေီ ပွောမရသညျ့အဆုံး ‘နောကျဆုံးတဈနပျတော့ မမေဆှေမျးကပျပါရစဦေး’ဟု တောငျးပနျကာ ဆှမျးခကျြရှာလသေညျ။
ထိုအဖွဈကို ဘဝဟောငျးမှမိခငျဘီလူးမ သိရှိသှားကာ အကွီးအကယျြသောက ရောကျလတေော့သညျ။ ကွံရာမရသညျ့အဆုံး သူမ၏သုခုမရုပျနုခန်တာကိုယျအား သားကိုရငျသာနု၏ သွဠာရိကရုပျကွမျးခန်တာထဲသို့ ဝငျရောကျ ပူးကပျလိုကျလတေော့သညျ။
သာနုသာမဏေ၏ ဦးခေါငျးနှငျ့ဇတျသညျ ကြောဘကျသို့ လညျထှကျသှားပွီး ရုတျတရကျ လဲကသြှားလတေော့သညျ။ မကျြလုံးကွီးပွူးထှကျလာပွီး ပါးစပျမှ တံတှေးမြား အဆကျမပွတျ ယိုစီးကလြာလတေော့သညျ။
မိခငျဖွဈသူလညျး ခကျြပွုတျနရောမှ ခကျြခငျြးပွေးလာပွီး သားကိုပိုကျလကျြ ငိုကွှေးနလေတေော့သညျ။ ရဟနျးသံဃာမြား ဥပသကာ ဥပါသိကာမြားလညျး စုရုံးလာကွသညျ။
ကိုရငျ့ကို စီးထားသောဘီလူးမသညျ နကျသောအသံကွီးဖွငျ့ “ရှဈပါးသီလကို ဆောကျတညျသူတို့အား ဘီလူးမြားဝငျရောကျ မပူးကပျနိုငျသျောလညျး ယခုသာနုသာမဏသေညျ လူထှကျရနျဟူသညျ့ မကောငျးသော အကွံအစညျရှိ၍ နှောငျ့ယှကျရသညျ။
နောငျအခါ လူထှကျမယျကွံတိုငျး ယခုကဲ့သို့ပငျ ပူးကပျနမှောပဲ”ဟု ကွုံးဝါးသတိပေးပွီး သာနု၏ကိုယျထးမှ ထှကျလသေညျ။
သာနုလညျးပွနျလညျသတိရလာပွီးမှ ဖွဈပုံကိုသိသှားရာ ‘သွ. .ငါ၏အဖွဈကို နတျတှကေတောငျ သိနပေါပေါ့လား’ဟု ရှကျရှံ့ခွငျးအထူးဖွဈမိကာ လူထှကျရနျအကွံကို စှနျ့၍ ထိုနတှေ့ငျပငျ ရဟနျးဘောငျသို့ တကျလတေော့သညျ။
လောကသုံးပါး၏ တုနှိုငျးမဲ့ဆရာသခငျဖွဈတျောမူသော ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျထံတျောပါးသို့ သာနုမထရျေခဉျြးကပျလာလြှငျ “ခဈြသား. .ဤစိတျသညျ ဟိုးရှေးအခါကပငျ အာရုံကို အလိုရှိတိုငျး လှညျ့လညျကကျြစားခဲ့ပွီးပွီလေ. .
ခြှနျးကိုငျထားတဲ့ ဆငျထိနျးဟာ မုနျယဈနသေောဆငျကို နှိပျကှကျဘိသကဲ့သို့ အေးခမျြးအောငျ သငျ့တငျ့မြှတအောငျ နှလုံးသှငျးပွီး စိတျကို ကောငျးစှာနှိပျကှပျပွီး မွတျသောတရားကိုသာ အားထုတျလလေော့! ဟူ၍ သွဝါဒပေးတျောမူပါသညျ။
ဤသို့ဖွငျ့ အရှငျသာနုသညျ ဘဝဟောငျးမှ မယျတျောနတျဘီလူးမ၏ မိခငျမတ်ေတာကွောငျ့ နောငျအခါတှငျ ပိဋကတျသုံးပုံဆောငျနိုငျသညျ့ ရဟန်တာအရှငျမွတျကွီးတဈပါး ဖွဈလာခဲ့ပွီး သကျတျော (၁၂၀)မှာနိဗ်ဗာနျကို မကျြမှောကျပွုကာ ပရိနိဗ်ဗာနျစံတျောမူခဲ့ပါသတညျး။
တကယျတော့ အနမတဂ်ဂရှညျလြားလှတဲ့ သံသရာဝဋျဆငျးရဲးအတှငျးမှာ သတ်တဝါတှဟော ယူခဲ့ရတဲ့မိနျးမတှေ ယူခဲ့ရတဲ့လငျသားတှဟော မဟာသမုဒ်ဒရာလေးစငျးထဲကသဲလုံးမြား မကအောငျပငျ ရှိခဲ့လပွေီတကား။ ဗုဒ်ဓသာသနာတျောနှငျ့ ကွုံတုံးကွုံခိုကျမှသာ ရနိုငျတဲ့ ဈာနျတရား မဂျတရားတှကေသာ ရှားပါးအဖိုးတနျပွီး ရခဲလှ၍ အရယူသငျ့ပသေညျ။
ယုတျစှအဆုံးလူသားမပွောနှငျ့ တိရိစ်ဆာနျဘုံ၌ အသိဉာဏျအနိမျ့ဆုံးဖွဈတဲ့ အငျးစကျပိုးမှားတှေ ခွငျတှတေောငျ မထေုံသံဝါသပွုကွလသေညျပဲ။ အိမျထောငျပွုကွလသေညျပဲ။
ဒီကာမတဏှာတှဟော အပွငျပနျးကကွညျ့လြှငျ မကျလောကျစရာ တဈခုခုရှိသကဲ့သို့ အသှငျဆောငျသျောလညျး အမှနျတကယျ ခှဲစိတျစဈဆေးကွညျ့လိုကျလြှငျ ဘာအနှဈသာရမှ မရှိလပွေီတကား။
မကျြမှောကျခတျေ၂၁ရာစုကဲ့သို့ လောက၏ငွိမျးခမျြးရေးတရား ပကျြယှငျးလာသညျ့အခြိနျ၌ ကွညျလငျသနျ့ရှငျးတဲ့ ဝမျးမွောကျစရာတှရှေားပါးလာသညျ့ အခါ၌ ပိုလို့ပငျ သံဝဂေရသငျ့ တရားကို အားထုတျသငျ့လပွေီ။
အသကျရှငျသနျနရေခွငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးအခှငျ့အရေးသညျကား ဗွဟ်မဝိဟာရတရားကို ပှားမြားကွဘို့ပငျတညျး. . .။ ကမျြးကိုး ; : ဓမ်မပဒပါဠိတျောနာဂဝဂျ
ဗုဒ်ဓသာသနာပွု ဆရာကောငျးထှဋျခေါငျ (ဝမျးတှငျးမှျောစကျရှငျ)
ဝိဇ်ဇာဓရဂမ်ဘီရအစီအရငျနှငျ့ဗဒေငျယတွာ၊ မင်ျဂလာအကွံပွုဟောခနျး၊ ရနျကုနျမွို့။ ၀၉၄၂၈၁၁၅၂၃၅